Colour painting and Color palette makers Malunga nathi-Umbala wePicker evela kuMfanekiso
Malunga nathi-Umbala wePicker evela kuMfanekiso
I-Bridgegalleryny.com yindawo yewebhu elungiselelwe nina enifuna ukuthatha ithuba lokukhetha umbala kumfanekiso, isikhethi sombala we-RGB, isikhethi sombala we-chrome, umbala wokukhetha umbala, isikhethi sombala we-chrome, isikhethi se-adobe, okhethiweyo wombala we-html izinto ezininzi ezisebenzisa le webhsayithi.
I-Bridgegalleryny.com iluncedo kakhulu kuni nina nisebenza njengabaqulunqi bemibala, abapeyinti, abakhethi bemibala, abakhethi bemibala ye-android, abenzi bewebhu kunye nabaqambi, abahombisi begumbi, abaqulunqi bezakhiwo, kunye nobunye ubuchwephesha obunokuthi basebenzise eli thuba kwiwebhusayithi.
Le webhusayithi ye-golggnyny.com inokuchaza ngokweenkcukacha zonke izinto ezinombala eziqulathwe kumfanekiso, kubandakanya imibala elandelelana, imibala yesampula, imibala ye-hex, imibala ye-RGB, kunye namagama emibala egcwalisiweyo ngokupheleleyo.
Ukuba wenza iphepha lewebhu okanye ibhlog okanye njengebhulogi enobungcali okanye i-amateur, ndiqinisekile ukuba uya kuba nzima kakhulu ukwahlukana nombala we-hexadecimal okanye umbala we-hex. Kuba le hex yombala isetyenziswa kakhulu ukwenza iinguqulelo ezahlukeneyo zemibala kwiwebhu.
Ithetha ukuthini i-Hex Colour?
Umbala we-Hex empeleni awunguye umbala kodwa yenye yeendlela zokubhala iikhowudi zombala phakathi kwezinye iintlobo zokubhalwa kwemibala, njengeRGB, HTML, okanye ezinye izinto. Yiyo ke loo nto ibizwa ngokuba yiKhowudi yeMibala yeHexa, okanye yifinyeziwe njengeKhowudi yeHexa okanye uHexa Coor okanye uHex.
Ukubhala kusetyenziswa amanani ukusuka kwi-0 ukuya ku-9 kunye noonobumba (ukusuka ku-A ukuya ku-F), inani leekhowudi linonobumba aba-6, linokuqulatha amanani okanye oonobumba, okanye ukudityaniswa kwamanani kunye nonobumba. Ke njengophawu phambi kwakhe usebenzisa ucingo ekuqaleni.
# 000000 (amanani kuphela)
#FFFFFF (iileta kuphela)
# I-FF0000 (amanani kunye neeleta zidibeneyo)
Ukongeza, ukuba kwihlabathi lokuyilwa kwemizobo kunye nokuprintwa, kufuneka uqhelene negama lombala we-RGB, elungiselelwe ukuvela kweDijithali okanye umboniso wedijithali.
Ithetha ukuthini imibala ka-RGB ???
I-RGB imele “Ibomvu-Luhlaza-Luhlaza” yimodeli yokukhanya kombala (umdibaniso wemibala eyongeziweyo) esetyenziselwa izixhobo zokufaka ezinje ngoomatshini bokuskena izixhobo kunye nezinto ezikhutshiweyo ezinjengomboniso wokubeka iliso, imibala ephambili (ebomvu, luhlaza, luhlaza) kuxhomekeke kwitekhnoloji isixhobo esisetyenziswa njenge-CCD okanye i-PMT kwiskena okanye ikhamera yedijithali, CRT okanye iLCD kwisikrini esibonisa.
Xa (i-Red-Blue-Green) le mibala mithathu idityanisiwe ukwenza imhlophe, kwaye esi sisizathu sokuba i-RGB ibizwa ngokuba nguMdibaniso oMdaka okanye eminye imibala yokukhanya kolwimi. Umbala we-RGB ngumgaqo wombala osetyenziswa yimithombo yeendaba zombane ezinje ngeetelevishini, iimonitha zekhompyuter kunye nezikena. Ke ngoko, imibala eboniswe yi-RGB ihlala iqaqambile kwaye imnandi, kuba zilungiselelwe ngendlela yokuba zibeke iliso kwimiboniso, zingaprintwa ukuze zikhululeke ngokudlala ngemibala. Kodwa oko akuthethi ukuba i-RGB ayinangxaki kuba umbala wombala we-RGB uyakuhlala uboshelwe kumthamo / kubuncinci beempawu zekhompyuter. Ke ukuba ikhomputha esiyisebenzisayo inekhadi elibonisa kakuhle kunye ne-LCD esweni, ukuboniswa kombala we-RGB kuya kuba ngcono kakhulu kunesikhombisi sokujonga ikhadi elinemifanekiso eqhelekileyo.
Koku kulandelayo, ndiza kukuchaza ngeendlela oza kuzisebenzisa ukuze ukhethe umbala ovela kumfanekiso ngolu hlobo lulandelayo:
1. Cofa ku Khetha u “Khetha umfanekiso wakho” uze ukhethe umfanekiso ofuna ukuba uyazi ikhowudi yemibala kwaye uyilayishe.
2. Chwetheza igama lomfanekiso kwikholamu engenanto, emva kokuba “Faka igama lomfanekiso”
3. Emva koko cofa u “Ngenisa”
Emva kokulandelelana okukhulu kwemibala, imizekelo yemibala, imibala ye-hex, imibala ye-RGB, kunye namagama emibala agqibile kwaye abanzi kwitafile.
Njani?? Kulula, kunjalo?
Nceda uzame ukufaka imifanekiso emininzi njengoko unayo. Kwaye jonga iziphumo zokudibanisa imibala eziveliswe kwitafile. Ifoto oyilayishile izakubonisa yonke imibala ebalaseleyo, umbala we-hex, umbala weRGB, kunye negama lombala.
This "Malunga nathi-Umbala wePicker evela kuMfanekiso" graphic has 20 dominated colors, which include . It makes so beautiful color combination inspired from this image.